प्रतिष्ठानमा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको रोकथामको तयारी - होमपेज
प्रतिष्ठानमा तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको रोकथामको तयारी
बालबालिकालाई २० शैयाको आईसियु सुरु
दाङ । सम्भावित तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ। मुलत तेस्रो चरणको संक्रमणबाट बालबालिकाहरु बढि प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ। प्रतिष्ठानेले बालबालिकाहरु माथि हुने सक्ने कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिम रोक्नका लागि उपचार ब्यवस्थापनको तयारी गरेको जनाएको छ। बालबालिकाहरुको उपचारका लागि २० बेडको आईसियु सञ्चालनमा तत्कालै ल्याउने गरि प्रतिष्ठानले तयारी थालेको छ। त्यसोत, प्रतिष्ठानमा मंगलबार देखि आईसियु सेवा सुरु भैसकेको छ। तर कोेरोनाको महामारीबाट बालबालिकाहरुमा हुन सक्ने खतरा रोक्नका लागि थप बीस बेड क्षेमताको आइसियु सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा प्रतिष्ठान छ।
यसैगरि १० बेडको पिआईसियु र ६ बेडको एनआईसियु सेवा सञ्चालनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भैरहेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगिता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको संक्रमण कम बन्दै गईरहेको र तेस्रो लहरको संक्रमण पुनः फैलन सक्ने तथा यसले बालबालिकाहरु बढी प्रभावित हुन सक्ने खतरा औँल्याईएको छ,’उपकुलपति भण्डारीले तेस्रो लहरबाट बालबालिकाहरुमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हामीहरुले उपचारको पूर्व तयारी गरेका छौँ।
यसैगरि देशका केहि स्थानमा कोरोना संक्रमितहरुमा देखिएको कालो ढुसीको परिक्षण र उपचारको व्यवस्थापन पनि प्रतिष्ठानले गरेको छ। यसअघि प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमणको मात्रै जाँँच गर्ने गरेकोमा कालो ढुसीको परिक्षणका लागि पनि स्वाब संकलन गरिएको उपकुलपति भण्डारीले जानकारी दिईन्। ‘कोरोना संक्रमतिहरुमा फाट्ट फूट्ट रुपमा देखिएको कालो ढुसीको परिक्षण र उपचार पनि प्रतिष्ठानले सुरु गरेको छ,’उपकुलपति डा. भण्डारीले भनिन् ‘यो रोगको उपचारका लागि तीन जना विशेषज्ञ डाक्टरहरुको ब्यवस्थापन गरिएको छ। कालो ढुसीको उपचारमा उपकुलपति डा. भण्डारी स्वयं खटिने छिन् भने अन्य दुईजना नाक, कान , घाँटी रोग बिशेषज्ञहरु पनि खटिने छन्।
यसैगरि कोरोनाको दोस्रो चरणको महामारीका बेला भोग्नु परेको अक्सिजन अभावको समस्या समाधानका लागि प्रतिष्ठानले दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको अन्तिम तयारी गरेको छ। अक्सिजन अभावकै कारण कैयन बिरामीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको र अन्य जटिल प्रकृतिका रोगका बिरामीहरुलाई पनि अक्सिजनको सहज उपलब्धताका लागि प्रतिष्ठानले दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको योजना ल्याएको हो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा। भण्डारीका अनुसार आगामी हप्तामा एउटा प्लान्ट जडान भैसक्ने छ भने अर्को प्लान्ट तीन हप्ता भित्रमा जडान भैसक्ने छ। ‘अक्सिजन अभावमा कैयन बिरामीहरुले ज्यान गुमाउनु परेको तितो यथार्थता हामीसंग छ,’ उनले भनिन् ‘यससंगै जटिल प्रकृतिका अन्य रोगका बिरामीहरुको सहजताका लागि पनि प्रतिष्ठानले दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने छ, यसको अन्तिम तयारीमा हामी छौँ।’
दोस्रो चरणमा १४ हजार परिक्षण
राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएयता झण्डै १४ हजार जनाको परिक्षण गरेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा। प्रज्ञा सिंह बस्नेतका अनुसार दोस्रो लहर सुरु भएयता प्रतिष्ठानमा १३ हजार ८ सय १७ जनाको पिसिआर परिक्षण भएको हो। ‘कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएयता प्रतिष्ठानमा १४ हजार ८ सय १७ जनाको कोरोना जाँच भएको छ,’ मंगलवार प्रतिष्ठानले गररेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ‘ दोस्रो लहरको संक्रमणका बेला प्रतिष्ठानमा २ सय ९५ जनाको उपचार भएको छ।’ २ सय ९५ जना मध्य २ सय ३२ जना उपचार पश्चात निको भएको र ४१ जनाको मृत्यु भएको छ।
यसैगरि २२ जनालाई अन्यत्र रेफर गरिएको पनि डा। बस्नेतले जानकारी दिईन्। ‘२२ जना बढि गम्भिर बिरामी रहनु भएको र उहाँहरुलाई भेण्टिलेटर चाहिने भएकाले रेफर गरिएको हो,’ डा. बस्नेतले भनिन्। यसअघि कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा २३ हजार ९ सय ४६ जनाको पिसिआर परिक्षण भएको थियो। पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा उपचाररत कोरोना संक्रमित कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन।
admin0457 ३ महिना अगाडि समाचार
पूर्व मन्त्री शर्माद्धारा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान
दाङमा अक्सिजन उत्पादन सुरु